विवादमा तानिदै चम्पादेवी गाउँपालिका ! « News24 : Premium News Channel
विवादमा तानिदै चम्पादेवी गाउँपालिका !
ओखलढुंगा । केही समयदेखि ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका बिबादको भुमरीमा परिरहेको छ । गाउँपालिकाले डेढ महिना अघि दुई दर्जन बढी कर्मचारी एकैपटक भर्ना गरेको बिषयलाई लिएर बिबाद उत्पन्न भएको हो । उक्त बिबाद अहिले प्रशासन हुदै अदालतसम्म आइपुगेको छ ।
कर्मचारी भर्नाको बिषयलाई लिएर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुखबीच नै टकराव उत्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाले केही महिना अगाडि २० जना शिक्षक, एक वडासचिव, ६ जना इन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीसहित २७ जना नियुक्त गरेको थियो ।
सोही कर्मचारी नियुक्त प्रकृयालाई कानुन बिपरित भन्दै विरोध सुरु भएको छ । कार्मचारी भर्ना प्रकृया गाउँपालिका प्रमुखको आफुखुसी रहेको कार्यपालिका सदस्यहरुले नै आरोप लगाएका छन् । चम्पादेवी गाउँपालिकाका १० वडा मध्ये नेकपाका चारजना वडाअध्यक्षसहित नेकपाका कार्यपालिका सदस्यहरु बिरोमा उत्रिएका हुन् ।
नेकपालको बिरोधका कारण गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रभावित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको अनियमितताका बिरुद्ध नेकपालको गाउँपालिका कमिटीले केही समय अघि गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीलाई ध्यानाकर्षण समेत पत्र बुझाएको थियो । तर ध्यानाकर्षण पत्रको समेत सुनुवाई नभएपछि नेकपा गाउँ कमिटीले गत पौष १६ गते गाउँपालिकामा तालाबन्दी समेत गरेको थियो ।
नेकपा र नेकपा समर्थित वडा अध्यक्षहरुले यस बिषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा समेत ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले समस्याका बारेमा बुझेकाले समस्या समाधान गर्न पहल भैरहेको बताए । सोही गाउँपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष झलकमान तामाङ, ६ नम्बर वड का सुरेश थापा, ७ नम्बर वडाका तिलक खड्का र ९ नम्बर वडाका झम्कहरि बडालले समेत संयुक्त रुपमा गाउँपालिका बिरुद्ध प्रशासनमा छुट्टै निबेदन दर्ता गराएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखापाल मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेको, नियम बिपरित कर्मचारी गरेकाले निवेदन दिनु परेको गाउँपलिका ७ का वडाअध्यक्ष सुरेश थापाले बताए । गाउँपालिकाको अनियमितताका बिरुद्ध प्रशासनमा उजुरी दिएकाले अब अदालतमा जाने समेत बताए । तर गाउँपलिकाले भने करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन बनाएर कर्मचारी तथा शिक्षक भर्ना गरिएकाले बिरोधको अर्थ नभएको जनाएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेल गर्दै गाउँपलिकाले ती सबै आरोप आधारविहिन भएको जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले सम्मेलमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाका बिषयमा गरिएका विभिन्न प्रचार झुटो भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर उक्त गाउँपालिका अनियमितताको बिषयमा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ । केही समयअघि स्थानीयले गाउँपालिकाले फछ्र्यौट गरेको योजनामा समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।